UGAAR AH DUMARKA: Lixdaan calaamadood hadaad ku aragto ninka mustaqbal kaama rabo - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/UGAAR AH DUMARKA: Lixdaan calaamadood hadaad ku aragto ninka mustaqbal kaama rabo
Shabakadda ka faaloota Arrimaha Bulshada ee Aayaha Online, ayaa waxa ay idiin soo gudbineysaa tilmaamaha lagu garto ninka marka aadan ahayn ama uusan rabin inuu kaa dhigto Xaakiisa mustaqbalka.
Ma qiimeeyo taladaada
Haddii ninka aad rabtid inaad guursatid aysan qiimo ugu fadhin taladaada, amaba uusan qaadan hubaal waxaad galeysaa guur aanan micno ku fadhin amaba aanan sidii xaas dhab ah laguu qiimeyneyn.
Ninka qiimaha ugu fadhisid waxa uu qiimeeya taladaada xittaa hadii uusan kugu raacsaneyn, waa inaad qiimo yeelataa.
Miyuu ku dhageystaa ? dareen miyuu ku siiyaa ? miyuu yahay qof dhagaha ku siiya si uu u ogaado marka aad wax u baahantahay? Hadii ay maya tahay jawaabta, waa inaad ka taxadartaa halka aad ku wajahantahay?
Inuu ku guursado ayaad ka baridaa
Haween badan waxay ragga ka baryaan inay guursadaan balse waxan u arkaa qalad si walbo waa qalad, hadii aad la socotid nin kuu quumeeya sida aad u qiimeysid, kama baryeysid inuu ku guursado, wuu ogyahay inay qasabtahay inuu ku guursado.
Si’ kastaba, galitaanka guur ceynkaan ah oo aad baryeysid wuxuu micnaheeda yahay waad isqiimo tirtay waana halis.
Sidii qof u dhow kuulama dhaqmo
Marka uu kuula dhaqmo sidii qof ajnabi ka aha, qorshaha uguma jirtid kumana qiimeeyo, waa inaad ka taxadartaa inaad guursatid nin noocaas ah.
Ma hubtid inuu ku jecelyahay
Waxay noqon kartaa mid aadan hubin inuu ku jecelyahay: waxay noqon kartaa in maanta uu adiga kula koogo berrina meel kale, waxay noqon kartaa inuusan kuu muujin jacayl, inaad guursatid nin aadan hubin inuu ku jecelyahay waa Qatar aad gacamahaaga ku keensaneysid.
Waxaad tahay dookhiisa labaad
Marka aad noqotid dookhiisa labaad ninka aad rabtid inaad guursatid, waa inaad laba mar ka fekertaa taas.
Waa inaad noqotaa dookha 1-aad ee noloshiisa ama dookha 1-aad ee qorshihiisa.
Drama as man attacks M-pesa agent for denying him a customer lady's number